Malunga nathi - Ningbo Oturn Machinery Co., Ltd.
OTURN OOMATSHINI yindawo yentengiso yaphesheya kunye nendawo yokuthengisa esekwe ziifektri zeqela lethu. Yikuphi ukugxila kwi-R & D kunye nokuveliswa komgangatho ophezulu, oomatshini abasebenza ngokugqibeleleyo kunye nenjongo ekhethekileyo kumthengi, sikwayila isisombululo semigca yokuvelisa kubathengi ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100. Khetha okwangoku eyona ndlela isebenzayo yokwenza abathengi, kwaye ugcine ngokufanelekileyo Iindleko zotyalo-mali lwezixhobo kunye nokufumana kwakhona iindleko zangaphambili.
Amashishini aphambili abandakanyekayo koomatshini kunye nakwimigca yokuvelisa iivenkile ezahlukeneyo zeshishini, ukufakela umbhobho, iflange, oomatshini bokwakha amandla, ukuhambisa, ukungunda kunye namanye amashishini. Uyilo lweqela lobuchwephesha kuMveliso weMveliso yeValve, ekwakheni umgca wokudibanisa ukuya kwiindidi zokwenza imveliso yevalve, ukuvavanywa kwevalve kunye ne-welding, sonke sinamava entengiso kunye namatyala.
Iimveliso zoomatshini eziveliswa liQela lethu njengezantsi
1: Umatshini weValve okhethekileyo
2: CNC ukubhola Kwaye Milling Machine
3: IZiko Drive CNC lathe
5: IZiko leMachining ye-CNC
6: CNC Gantry Milling Iziko
I-7: I-Vertical Turret Lathe
8: I-CNC yeGear Hobting Machine
9: Deep Hole kusombiwa Machine
I-Valve Production Production Line ikwayimveliso yethu edumileyo neyaziwayo eyilelwe liqela lethu lobuchwephesha, ekwakheni umgca wokuphosa iindibano kwiindidi ze-machining ze-valve, ukuvavanywa kwevalve kunye ne-welding, sonke sinamava entengiso kunye namatyala.
Izisombululo zomngundo zeZithuthi kunye neziXhobo zeKhaya ziyafumaneka ngokweQela lethu.
Iseke ubudlelwane bexesha elide kunye ne-FAW-Volkswagen, i-SAIC-Volkswagen, iMercedes-Benz kunye neToyota, iFoton kunye ne-Denso air-conditioning.
Ukubonelela abathengi bethu ngokuthenga izixhobo zokuma kunye, ngelixa bethembisa ukubonelela ngamaxabiso amahle kunye nokuthengisa kwangaphambili kunye nokuthengisa emva kweenkonzo.Ngoko ke umthengi uhlala esinika ingxelo elungileyo ngokuchacha okuphezulu.
Impumelelo yeshishini isekwe kwimigangatho ephezulu, amashumi eminyaka yamava kunye nezisombululo ezigqwesileyo ngenkonzo ebalaseleyo, sisoloko sinesisombululo esikhethekileyo nesinokuthenjwa ngeendlela ezahlukeneyo zabathengi.
Ukuza kuthi ga ngoku sithumele kumazwe angaphezulu kwama-50, afana ne-United States, Canada, Mexico, Germany, Italy, Sweden, Russia, Saudi Arabia, Turkey, Iran, India, South Korea, Morocco, South Africa, Thailand njalo njalo.
Ukuba inkampani yakho ifuna ukuphucula ukusebenza kwemveliso kunye nokunciphisa iindleko, zidibanise nathi, isisombululo sethu siya kuba sesona silungileyo.